परिवारका लागि कति सम्पति छाडेर अस्ताए इरफान ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
. बलिउडमा तेस्राे झड्का, चर्चित फिल्म निर्माताको निधन
इरफान खान यस्ता अभिनेता थिए जसले बलिउड सँगै हलिउडमा समेत आफ्नो शानदार अभिनयको छाप छोड्न सफल भए। सन् २०१८ मा इरफान न्यूरोएन्डोक्राइन ट्युमरबाट पीडित बनेका थिए। रोग लागेको थाहा भएपछि उपचारका लागि उनी लण्डन गए। रोगका कारण उनी केही समय बलिउडबाट टाढिए। लगभग एक वर्षपछि भारत फर्केका उनले ‘अंग्रेजी मिडियम’ फिल्ममा खेलेका थिए। करोडौँ मानिसको हृदयमा बसेका उनलाई मुम्बईको वर्सेवामा रहेको क्रबिस्तानमा बुधबारनै अन्तिम बिदाइ गरियो । जहाँ २० जना मात्र आफन्त उपस्थित थिए।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्गलवार, वैशाख २३ २०७७ १३:१६:२३